musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Nigerian Ibom Air inotenga gumi nyowani Airbus A220 jets
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Investments • nhau • Nigeria Breaking News • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Nigerian Ibom Air inotenga gumi nyowani Airbus A220 jets.
Nigeria, ine huwandu hukuru muAfrica uye yakakura kwazvo GDP, inopa kukura kwakakura kugona mukufamba kwemumba nedunhu.
Ibom Air parizvino inobhururuka kuenda kuUyo, Abuja, Calabar, Enugu, Lagos, uye Port Harcourt ichishandisa maA220 maviri.
Kutengwa kwemaA220 matsva kuchagonesa iyo ndege kuti ienderere mberi munzira yekukura, ichipa nzira nyowani mhiri kwete Nigeria chete, asi kumadokero kweAfrica uye kuAfrica zvachose.
Airbus A220 ndiyo chete ndege chinangwa-yakavakirwa 100-150 zvigaro musika.
Akwa Ibom hurumende yenyika ine ndege muNigeria, Ibom Mhepo yakasaina odha yakasimba yegumi (10) A220s paDubai Airshow. Kusaina uku kwakaitwa naMfon Udom, Chief Executive Officer weIbom Air, uye Christian Scherer, Chief Commercial Officer uye Musoro we. Airbus International pamberi paGavhuna wedunhu reAkwa Ibom, VaUdom Gabriel Emmanuel.
Nigeria, ine huwandu hukuru muAfrica uye yakakura kwazvo GDP, inopa kukura kwakakura kugona mukufamba kwemumba nedunhu. Iyo A220 saka ndiyo yakanakira sarudzo kune yakazara yakazara masevhisi kubva kupfupi-haul zvikamu kusvika kune intra-continental mhepo nzira.
“Zvinondipa mufaro mukuru kuva pano kuzozivisa odha yeIbom Air yegumi Airbus A220s”, akadaro Mfon Udom, CEO we Ibom Mhepo. “Sesangano, isu veIbom Air tinofara nekukura kwatakaita mumakore anodarika maviri nehafu kubva patakatanga kushanda, kukura kunosundwa nekumbundira kukuru kwechigadzirwa chedu nerudzi neruzhinji rwevanhu vekuNigeria vanobhururuka. . Kuwedzerwa kweA220 kune zvikepe zvedu kuchatsigira hurongwa hwedu hwekukura uye kuwedzera kushanda zvakanaka. Ichapawo vafambi vedu nzvimbo yakawanda uye yakagadziridzwa kabhini ruzivo, sekuwedzera kukosha kwekusarudza isu. "
"A220 ichatibvumira kuwedzera huwandu hwevafambi vepagore kuburikidza neAkwa Ibom Airport, muUyo, nokudaro tichiunza vashanyi vekutanga nevafambi vebhizinesi mudunhu. Kuedza uku kunoratidza kuzvipira kwedu kutsigira kutengeserana kwenzvimbo uye kuita mupiro wakanaka mukukura kwehupfumi munharaunda yeAkwa Ibom neNigeria. " akadaro Gavhuna wedunhu reAkwa Ibom, VaUdom Emmanuel.
Ibom Mhepo parizvino inoshanda maA220 maviri. Ndege inobhururuka ichienda kuUyo, Abuja, Calabar, Enugu, Lagos, uye Port Harcourt. Kutengwa kwemaA220 matsva kuchagonesa iyo ndege kuti ienderere mberi munzira yekukura, ichipa nzira nyowani mhiri kwete Nigeria chete, asi kumadokero kweAfrica uye kuAfrica zvachose.
“Tinofara kuwedzera Ibom Air semutengi mutsva weAirbus. Iyo A220 inonyatsokodzera kune zvinodiwa nendege zveNigeria, ichipa shanduko yekushanda kuti ikure bhizinesi nekupindura kudiwa kwekuwedzera masevhisi evatyairi. Kuburikidza nekudyara uku, Ibom Air iri kusimbisa chishuvo chayo chedunhu uye nekufamba kwenguva, kubatana kwenyika dzese uye kushanda zvakanaka. ”, akadaro Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer uye Musoro weInternational.
The A220 ndiyo chete ndege chinangwa-yakavakirwa 100-150 zvigaro pamusika; inopa kusarongeka kwemafuta ekufambisa uye kunyaradza kwemuviri kwakakura mune imwe-kabhini kabhini, ine zvigaro zvakakura zvakakura, kamuri yemakumbo uye yekubatanidza pabhodhi yekuvaraidza nekutaurirana.
Pakupera kwaGumiguru 2021, iyo A220 yakanga yaunganidza mazana matanhatu nemakumi mana nematatu emirairo.